डर र संस्कार | Epradesh Today
कोरोना खर्च १६ करोड ४३ लाख
रेडक्रस सबैका लागि
बालवालिकामा कोभिड अनुभव….
Homeफिचरडर र संस्कार
डर र संस्कार
मलाई राम्रोसँग थाहा छ । यो समाजले मनलाई भन्दा बढी संस्कारलाई प्राथमिकता दिन्छ । मन भन्छ स्वतन्त्रसँग उडेर संसार डुल्न सकू ! र समाज भन्छ यो समाजले कोरेको लक्ष्मण रेखा नाघेर बाहिर ननिस्क ! अब भन्नुहोस् कसलाई अंगालेर हिडौं मन या संस्कार ? मनलाई अंगालौं त समाजमा नराम्रो हुने हुँ कि भन्ने डर ! संस्कारलाई अंगालौं त स्वतन्त्रसँग हिड्न नपाइने !
अचम्म छ हाम्रो समाज, बर्षाैदेखि संस्कार र दासताको घुम्टो चिरेर हिड्न चाहनेलाई कुसंस्कार देख्छन्, नारी परिवर्तनका आवाजहरू घन्काएर हिड्नेहरूलाई चरित्रहीन देख्छन्, उसको शृङ्गार हेरेर उसको मानसिकता र बौद्धिकताको अनि ब्यवहारिकताको आँकलन गर्छ समाज ।
कसैलाई हानी नगरेर आफ्नो अस्तित्व र स्वाभिमान मुठ्ठीमा राखेर हिड्न पनि घर र समाजको अनुमति लिएर हिड्नुपर्ने । नत्र त छोरी हो भने चरित्रहीन, बुहारी हो भने अलच्छिनाको चिनो नै भिराइदिन्छ समाज । त्यसपछि त ‘कुरा काट्नेहरूकै रोलमोडेल’ देखिन्छ ।
रस्मिला बर्षाैदेखि न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको आवाज घन्काउँदै हिडेकी एक यात्री । परिस्थितिले मान्छेलाई कङ्गाल अनि चन्डाल दुबै बनाउँछ, भन्छन् । साच्चै रस्मिलालाई पनि परिस्थितिले कहिले कंगाल र कहिले चन्डाल बनाउँदै लग्यो ।
ऊ यसलाई सहर्ष सहदै, स्वीकार्दै गई । जिन्दगी जीउने कला जिन्दगीसँगै सिक्दै र खेल्दै गई । महिला अधिकारका विषयमा वकालत गर्ने रस्मिलाको जीवनका पनि कैयौँ सङ्घर्षका पाटाहरू छन्, जसलाई उसले अठोट र आँटले सहजै पार लगाउँदै हिडेकी छ ।
जतिबेला रस्मिला घरकै आँगनीमा जिन्दगीका रेखाहरू कोर्ने कोसिस गर्थी । घरमा उसलाई छोरी हुनुकै कारण जो कसैसँग बोल्ने, अरूको कुराको प्रतिवाद गर्ने अनुमति थिएन । घरबाट बाहिर निस्कन पनि बा–आमाले हत्केलामा हस्ताक्षर गरिदिए मात्र हिड्न पाइने ।
त्यही पारिवारिक संस्कारकै कारण सबैले भनेको कुरा सही या गलत जे होस् मान्नुपथ्र्यो रस्मिलालाई ! पितृसत्तात्मक सोचले जरा गाडेको समाज । रस्मिलाको घरमा पनि कायमै थियो । त्यस्तो समाज, जहाँ अन्याय भएपनि महिलाले मुख बन्द गरेर सहनुपर्ने, क्षमता भएपनि महिला निरिह नै बस्नुपर्ने, जसले जे भनेपनि महिलाले चुपचाप मान्नुपर्ने ।
अचम्म छ हाम्रो समाज, बर्षाैदेखि संस्कार र दासताको घुम्टो चिरेर हिड्न चाहनेलाई कुसंस्कार देख्छन्, नारी परिवर्तनका आवाजहरू घन्काएर हिड्नेहरूलाई चरित्रहीन देख्छन्, उसको शृङ्गार हेरेर उसको मानसिकता र बौद्धिकताको अनि ब्यवहारिकताको आँकलन गर्छ समाज । कसैलाई हानी नगरेर आफ्नो अस्तित्व र स्वाभिमान मुठ्ठीमा राखेर हिड्न पनि घर र समाजको अनुमति लिएर हिड्नुपर्ने ।
यसको यथार्थ रस्मिलाले घरमै आफ्नै आमालाई देखि । र कयौंपटक आफूले पनि सहदै आई । छोरी हुनको कारणले नै घरबाट बाहिर निस्कन पाइन । सधैं घरको दबाबमा हिड्न बाध्य भई ऊ ।
उसलाई छोरी हुनुको तालिम दिइयो र सिकाइयो संस्कार भनेको छोरी मान्छे घरबाट बाहिर ननिस्कनु । यदि निस्किहाले पनि समाजले कोरेको लक्ष्मण रेखा ननाघ्नु, पुरूषसँग आँखा जुधाएर नहिड्नु । घरमा जे–जे सिकाइन्छ त्यही मात्र सिक्नु ।
केही प्रहरपछि समयले विस्तारै कोल्टो फेर्दै गयो । समाजमा देशमा महिला अधिकारका नाराहरू घन्कन थाले । महिलाको अधिकारको पक्षमा कानुन पनि विस्तारै परिवर्तन हुँदै गयो । रस्मिलाको मनमा दुईवटा कुराहरूले घोच्न थाल्यो । स्वतन्त्र र संस्कार ?
कयौंपटक आवाज उठाउन खोजी आवाज नै दबाउन खोज्यो यो समाजले । उल्टो समाजले उसलाई विभिन्न प्रकारका आरोपहरू लगाउन थाल्यो । रस्मिलालाई साथ दिने कोही भएन ।
बत्तीस लक्षणको खोक्रो खोल ओढेर दिदीबहिनी, आमा उसका साथीहरूले साथ दिनुको सट्टा उनीहरूले नै पितृसत्तात्मक सत्ता स्विकार्दै रस्मिलालाई गिज्याउन थाले । संस्कारप्रतिको विद्रोहको बिल्ला भिराउन खोज्यो यो समाजले उसलाई । तर उसले डर र अन्यायसँग आँखा जुधाएर हिड्न सक्ने सामथ्र्य गरी र निस्की बाहिरी संसारमा डरको बर्को फालेर ।
आखिर अन्त्यमा जित सत्यकै हुन्छ । कुरूप संस्कार र इतिहास बदल्न चाहनेहरूका लागि क्षणमै बदलिन्छ भन्ने प्रमाण उसले देखाई छाडी । रस्मिला हिजो आफ्नो अधिकार र स्वतन्त्रताको लागि आफ्नै साख्खै बा–आमासँग विद्रोह गरेर घरबाट बाहिर ननिस्केको भए एक्लै नलडेको भए आज ऊ त्यही घरभित्र नै सीमित रहने थिई । यो समाजका दिदीबहिनी, भाउजू, साथी, आमाहरू सधैं पुरूषहरूकै पितृसत्तात्मक सत्ता र दमनमा रहने थिए ।
आज रस्मिला निकै खुसी छे । हिजो चरित्रहीनको बिल्ला भिराउने यो समाजले नै आज उसलाई सम्मान गरेर हिडेको देख्दा । हिजो आफ्नै बाले आमा र आफूलाई बाहिर निस्कन दिएनन् ।
तर आज उसलाई विश्वास गरेर स्वतन्त्र दिएको देख्दा उसलाई छोरी भएर होइन मान्छे हुनुको गर्वले हर्षित तुल्याएको छ । सधैंभरी यो समाजमा डर बोकेर बाँच्ने रस्मिलालाई अब यो समाजले के भन्ला भन्ने डर छैन ? सबैको विश्वासलाई जितेर महिलाविरूद्ध हुने भेद्भावलाई पराकाष्ठा गर्दै हिड्न सफल भएकी छ ।
Uma Bhandari - April 1, 2021
खेलकुद March 22, 2021
फिचर March 15, 2021
breaking-news March 5, 2021